ချစ်ကြည်အေး: အန်တီ ဂျက်စတား
Ko Boyz Fri Nov 18, 11:14:00 PM GMT+8
ဟာ အဲဒါ မြန်မာတွေကို သက်သက် စော်ကားတာ။ အဲမှာ မြန်မာ ဝန်ထမ်းတွေလဲ ရှိတယ်။
TURN-ON-IDEAS Fri Nov 18, 11:25:00 PM GMT+8
Jetstar had sunk to the lowest of the low. It has become the worst airline due to that kind of delporable services.
No Name Fri Nov 18, 11:31:00 PM GMT+8
I would suggest you not to buy MAI ticket as well. Because Jetstar and MAI are code share (i.e partner airline). They are playing trick. Sue them :)
TZA Fri Nov 18, 11:43:00 PM GMT+8
၂ပတ်ခွာရအောင် ခွင့်ယူတာလွယ်တာမှတ်လို့ဗျာ၊ ကံကောင်းလို့ အဲဒီအတောအတွင်း ဝယ်မထားမိတာ။ :(
June Moe Fri Nov 18, 11:45:00 PM GMT+8
ကိုယ်တိုင် စလုံးကို တခါမှ မရောက်ဖူးပေမယ့် မြန်မာတွေကို နှိမ်တဲ့သတင်းတွေ ခဏခဏကြားနေရတယ်
ဒါမဲ့လည်း လာချင်တဲ့ စိတ်ကူးကို အခုထိ မစွန့်နိုင်သေး...ရော် ခက်ပ...
Moe Myint Tane Sat Nov 19, 12:38:00 AM GMT+8
What the terrible things Jet Star do!!! Damm!!! Fight It.
ညီရဲသစ် Sat Nov 19, 12:56:00 AM GMT+8
ဒါကတော့ သက်သက် မိုက်ရိုင်းတာဘဲ အစ်မ...
ဆော်တာဆော် မြန်မာပြည် တစ်ခေါက်ပြန်ဖို့ စီစဉ်ရတာ လွယ်တယ်များ မှတ်နေလားမသိဘူး။ သူတို့ မို့ ကိုယ်ချင်း မစာတယ်။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဟာတွေ...
sosegado Sat Nov 19, 01:19:00 AM GMT+8
ဒီနေ့လည်း MAI Bangkok ကန်ဆယ်လုပ်လို့ တစ်ချို့ TG ပါလာတယ်
မဒမ်ကိုး Sat Nov 19, 07:53:00 AM GMT+8
တော်ပါသေးရဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်မထားမိလို့း(
ဘာလို့ဆိုတော့ customer တွေကို စော်ကားလိုက်တာပဲ
နောက်တခုက မမချစ်ပြောသလို တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေဆိုရင် ရော လုပ်ပါ့မလား
အဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာဝန်ထမ်းတွေကရော ဒါကိုနည်းနည်းလေးတောင် မကန့်ကွက်ကြဘူးတဲ့လား
မဟုတ်လိုက်တာလေ တော်တော်ကိုမဟုတ်တာဘဲ ကြားရတာ
Rita Sat Nov 19, 09:10:00 AM GMT+8
ပြုတ်သွားတော့မှ ထိုင်သနားလိုက်မယ် (အားရင်ပေါ့)။
aye aye Sat Nov 19, 09:45:00 AM GMT+8
Hi All, my sister family also face the same situation. When they called jetstar, the jetstar gave so different reasons at different times. But what I know is one of my friend is also flying back from yangon same day , same flight , same time with my sister family and her ticket is ok and the flight is confirm for her. So I don't know about other people (why jet star cancel your tickets). My sister bought tickets since august with cheap price. Then my friend bought ticket in October. So what I think is jet star is canceling the passengers who bought ticket with cheap price. So if they have to refund, they can refund cheap price. Their business is so wonderful. It is their fault that their system is down or whatever. If they want to take responsibility, they can arrange another flight or they can arrange seat at MAI since they are partner. Jet star Suck
Vista Sat Nov 19, 09:57:00 AM GMT+8
အဖြူတွေ စလုံးတွေ သာဆို ဘယ်လုပ်ရဲမလဲ။
ကိုပေါ Sat Nov 19, 11:14:00 AM GMT+8
တကယ်ပဲ ထိထိရောက်ရောက် ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်သင့်ပါတယ်။
jasmine(တောင်ကြီး) Sat Nov 19, 02:37:00 PM GMT+8
မြန်မာတွေကို နှိမ်တဲ့သတင်းတွေ ခဏခဏကြားနေရတယ်....
mzo Sat Nov 19, 02:50:00 PM GMT+8
ဒီနေ့ 19.11.2011 မှာ Oversea Call ၀င်လာပြီး ပြောပါတယ်.. SIN-YGN 21.01.2012 Flight က Downgrade လုပ်လိုက်လို့ 20.01.2012 သို့မဟုတ် 25.01.2012 ကို ပြောင်းဖို့ပါ.. အဲလို ပြောင်းလဲမှုအတွက် တစ်ယောက်ကို $200 တန် Travel Voucher ပေးမယ် လို့ ပြောပါတယ်.. ဒါနဲ့.. လုံးဝအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်း ၊ ခွင့်က အံကိုက်ယူထားတာမို့ ပြင်ဖို့ မလွယ်တဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်.. တူတူပြန်မယ့် ညီမကိုလည်း တိုင်ပင်ရအုံးမှာမို့ confirm မလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်.. ပြန်ဆက်ဖို့ဖုန်းနံပါတ် တောင်းတော့ သူကပဲ ပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်လို့ ပြောတယ်... ဒါနဲ့.. သူဖုန်းမခေါ်ခင်.. အွန်လိုင်းမှာ check ကြည့်လိုက်တော့ Flight tickets sold out လို့ပဲ တွေ့ပြီး Flight ရှိသေးတာ တွေ့လို့ Singapore jetstar hotline ကို ခေါ်လိုက်တော့ .. လက်မှတ်က confirm ဖြစ်တုန်းပါ.. သူမထိရသေးဘူး။ ဒါနဲ့ အဲဒီပြန်မယ့်ရက်ကို လုံးဝ မထိဖို့ ပြောတဲ့အခါ Call Center ကလူက ဒါတွေကို သူတို့ စီစဉ်တာမဟုတ်လို့ မတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ .. ဖုန်းပြန်ခေါ်မယ် ပြောတဲ့အတွက်.. စောင့်ကြည့်ပြီး သူနဲ့ပဲ ပြောကြည့်ပါလို့ပြောတာနဲ့... ဆက်စောင့်လိုက်ပါတယ်..ခုနက နေ့လည် 1နာရီ 20လောက်မှာ ဖုန်းဝင်လာပါတယ်.. အဲဒီမှာတော့ ဒီပို့စ်မှာ တင်ထားတဲ့အတိုင်း တစ်ထပ်တည်းပဲ.. Full Refund ပြန်ယူဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် သူပြောတဲ့ 20.01.2012 Flight Date Change လုပ်ဖို့ 2နည်းထဲက တစ်နည်းကို ရွေးဖို့ ပြောပါတယ်.. အဲဒီအချိန်မှာ ဒီ blog ပေါ်က စာကို အသိ အစ်မက အီးမေးလ် fwd ပို့လို့ ဖတ်ထားပြီးချိန်ဆိုတော့.. အပြတ်ကို ငြင်းလိုက်ပါတယ်.. လုံးဝလဲမပေးနိုင်ဘူးလို့.. ဒါနဲ့ တဆက်တည်းမေးလိုက်တာ.. ဒီလို date change ဖြစ်တာ ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ ဆိုတော့ .. အယောက် (((( 80 )))) ပါတဲ့... ဒါဆို လေယာဉ်အသေးနဲ့ လိုက်လို့ရတဲ့ သူက ဘယ်နှယောက်လဲ ဆိုတော့ 120 ဆိုလား .. 170 ဆိုလားပဲ.. ငါက ဘာလို့ အဲဒီလိုက်လို့ရတဲ့ထဲမှာ မပါနိုင်တာလဲ၊ ငါလက်မှတ်က လွန်ခဲ့တဲ့ 2လတည်းက Confirmed ဖြစ်ခဲ့တာ၊ ဒီရက်မရမှာစိုးလို့ အစောကြီးကြိုဝယ်ထားရတာ လို့ ပြောတော့ .. သူ့အနေနဲ့ ဒီဖုန်းဆက်ရတာဟာ အကြောင်းကြားဖို့ သက်သက်ပါတဲ့.. 2နည်းထဲက တစ်နည်းကိုပဲ ရွေးပေးပါတဲ့..
အဲဒါနဲ့.. ငါ ဒီကိစ္စကို လက်မခံဘူး.. ဘယ်သူနဲ့ ပြောရမလဲဆိုတော့.. သူနဲ့ပဲ ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့.. သူ့အထက်အရာရှိ တခြားလူကို လွှဲမပေးပါဘူး.. ဖုန်းမချခင် အဆုံးထိ Refund ကို လက်မခံနိုင်ဘူး.. ရက်ပြောင်းတာကိုလည်း လက်မခံဘူးလို့ပဲ ပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်ပါတယ်..ခုတိုင်းဆို တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ အယောက် 80 ရက်ပြောင်းပစ်တာသာ မှန်ရင် တကယ့်ကို ရင့်သီးတဲ့ဆက်ဆံမှုပါ.. မြန်မာပြည်သားတွေကို ဖြစ်သလို မလေးမစားဆက်ဆံတဲ့သဘော သက်ရောက်နေပါတယ်.. တကယ်ဆို အယောက် 80 ဒီလောက်အရေအတွက် customers အတွက် ဒီထက်ကောင်းတဲ့နည်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဖြေရှင်းပေးသင့်တာပါ..
ကျေးဇူးပြု၍ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူ မြန်မာပြည်သားချင်းချင်း တိုင်ပင်ပြီး စည်းစည်းလုံးလုံး လက်တွဲ ပြီး ကူညီဖြေရှင်းပေးကြစေလိုပါတယ်...
Action ယူဆောင်ရွက်ပေးကြမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ ဒီ blog ပေါ်မှာ info updateလုပ်ပေးတဲ့ မိတ်ဆွေ မောင်နှမများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်လျက်..
ညိမ်းနိုင် Sat Nov 19, 03:01:00 PM GMT+8
...အလင်းစက်များ Sat Nov 19, 03:03:00 PM GMT+8
မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ။ မြန်မာတွေ နောက်မှာ ဘယ်ကောင်မှ နောက်ခံ ပေးမထားဘူး ဆိုတာ သိလို့လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေကြတာ။ ပေါင်းပြီး ရိုက်စား လုပ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အားပေးတယ်။ ကိုယ့်ဖက်က တရားသော စစ်ကို စိတ်အေး လက်အေး ဆင်နွဲကြဖို့ပါပဲ။
mzo Sat Nov 19, 03:31:00 PM GMT+8
same story with us !!
As I know, the number of passengers affected on my departure date (21.01.2012) is 80. Jetstar aldy emailed the changed itinerary to me although I didn't agreed to change date.
so upset ..
This must be the first & last time I buy Jetstar !!
mzo Sat Nov 19, 04:06:00 PM GMT+8
This is my post on Jetstar wall... ...
Jetstar called me to change our departure date which is the peak season of Chinese New Year. We bought the tickets online 2months ago. Jetstar already emailed the changed itinerary to me although I didn't agree to change date. They did offer usafull REFUND ora$200 worth travel voucher for each of us.
But what we lost is not only value for money but the value ofaconfirmed ticket with the very date which everything was well-planned ....
As I know, the number of passengers affected on my departure date (21.01.2012) is 80.
This must be the first & last time I buy Jetstar- !!
SHWE ZIN U Sat Nov 19, 04:39:00 PM GMT+8
ဒါမှ ညီမ ချစ်ကြည်အေး ကွ
ထိရောက် အောင်တိုက် သူတို့ က သက်သက် လူပါးဝတာ လွယ်လွယ် ရမယ်ထင်လို့
အတွေးကမ္ဘာ..မှတ်တမ်း Sat Nov 19, 04:48:00 PM GMT+8
Jetsatr ကို ကျွန်တော် Complain လုပ်တုန်းကတော့ Authority တွေကို စီစီ ထည့်ပေးလိုက်တယ်.. ဖြစ်စေချင်တဲ့ ပုံစံ အတိုင်းရခဲ့ ပါတယ်.. http://app.sgdi.gov.sg/listing.asp?agency_subtype=dept&agency_id=0000000028
JulyDream Mon Nov 21, 10:39:00 AM GMT+8
Jetstar ကို တခါပဲ စီးဖူးပါတယ်။ အဲဒါကလည်း စင်္ကာပူကို အတူတူ ပြန်လာမယ့်သူက အပြန်လက်မှတ်ကို Jetstar ကနေ ဝယ်ထားမိလို့ပါ။ Silk Air ထက် ဈေးသက်သာလို့ ဝယ်မိတာလည်း ပါတာပေါ့။ စလုံးကနေ ရန်ကုန် ခရီးစဉ်ကတည်းက သိပ်အဆင်မပြေပါ။ လေယာဉ် ထွက်ခွါချိန် မမှန်ပါ။ လေယာဉ်ပေါ်က Service လည်း ကွာတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ လေယာဉ်လည်း သေးတော့ ခုံတွေက ဒူးမလွတ်ဖြစ်ချင်ချင်ရယ်...
အဲဒီကတည်းက Jetstar မစီးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ... အခု ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိတော့ အဲဒီ Jetstar ဆိုတဲ့လေယာဉ်ကို ပိုလို့တောင် မစီးတော့ဘူးဗျာ။
အင်ကြင်းသန့် Mon Nov 21, 01:32:00 PM GMT+8
မြသွေးနီ Mon Nov 21, 02:59:00 PM GMT+8
အစ်မချစ် အစစ ကြိုလုပ်ထားတာ သိထားတော့ ဖတ်ပြီး..စိတ်တိုမိတယ်။ customer တွေကို လှည်စားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမျိုးက ရေရှည်မှာ အောင်မြင်မှုမရပဲ ကျဆုံးကြရမှာပါ။
Nyi Linn Thit Mon Nov 21, 05:38:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်အေး ပြောတာ လုံးဝမှန်ပါတယ်၊ အနောက်နိုင်တိုင်းသားတွေ၊ စင်ကာပူးရီးယန်းတွေဆို သူတို့ မလုပ်ရဲပါဘူး၊ ဒါဟာ မြန်မာတွေမို့လို ဒီလိုလုပ်လည်း သူတို့တွေ ပွစိပွစိပြောရင်း ပြီးသွား မှာပါပဲဆိုပြီး လူ့တန်ဖိုးကို ထည့်မစဉ်းစားဘဲ စော်ကားတဲ့ အဖြစ်ပါ၊ Media တွေအထိ ပေါက်အောက် လုပ်ပြီး ထိထိရောက်ရောက် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဖို့ အားပေးပါတယ်..။
ပန်းချီ Tue Nov 22, 11:29:00 AM GMT+8
updated news အရ ဒီ ဂျက်စ်စတားတော့ ပြုတ်စော်နံနေပြီ။ လူမျိုးရေးပါလာမှတော့ သူတို့တွေကို နောက်ဒီလိုမလုပ်ရဲအောင် အပြုတ်သာဆော်ဗျာ မမရာ...
An Asian Tour Operator Tue Nov 22, 05:29:00 PM GMT+8
Jetstar got Complaints.. I have shared this post on TravelMyanmarGroup where all professionals from Myanmar tourism industry are carefully reading.. and will be taking action sooner or later..
T T Sweet Tue Nov 22, 08:40:00 PM GMT+8
အကြည်ရေ တို့လဲဖတ်ပြီး အရမ်းစိတ်တိုတယ်။ ခံရတဲ့ သူတွေတော့ မပြောနဲ့တော့။
ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ တရားမျှတမှူအတွက် ဆက်သာလုပ်ပါ။ အားပေးပါတယ်။
HNINSIPHUU Wed Nov 23, 10:02:00 AM GMT+8
ကျနော်လည်းမနှစ်က ဒီလိုချိန်မှာအဲလိုဖြစ်ဖူးပါတယ်...ဒီထက်ပိုဆိုးတာက ခရီးသွားတဲ့လူက ရန်ကုန်ရောက်ပြီးမှ ရန်ကုန်-စင်္ကာပူ ခရီးစဉ်ဖျက်တယ်ဆိုပြီး..ဒီမှာကျန်ခဲ့တဲ့လူကိုဖုန်းဆက်တာ ..ဘယ်လောက်မိုက်ရိုင်းလဲ...ဒီမှာကျန်ခဲ့တဲ့လူသာမရှိဘူးဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...ရန်ကုန်ပြန်တဲ့လူကလည်း ဆက်သွယ်လို့မရနိုင်တဲ့ နယ်သာရောက်နေရင် တော်တော်ဒုက္ခရောက်မယ့်ကိန်းပဲ....တော်တော်လွန်တဲ့ Jet Star
nenemosha Wed Nov 23, 04:40:00 PM GMT+8
ဒီမှာတော့ တော်တော်လေးကို ကွန်ပလိန်း ထားပါတယ်..။
ဂျက်စတားတော့ သက်ဆိုးရှည်ဖို့ မမြင်တော့ဘူး
mstint Thu Nov 24, 08:52:00 AM GMT+8
Customer ရဲ့ သဘောတူညီချက်မရပဲ လုပ်ချင်သလို လုပ်တာတော့ တရားလွန်တာပေါ့။ ကိုလတ်ပြောသလို မြန်မာတွေပြဿနာတက်တိုင်း ကိုယ့်ကို ကြားကန်ပေးမဲ့ အမာခံမရှိတာလည်း အချက်တစ်ချက်အပါအဝင်ဖြစ်သလို မြန်မာပတ်ပို့စ်ဆိုတာနဲ့ နှိမ်ကိုနှိမ်ချင်ကြတာလည်း ငြင်းလို့မရဘူး အချက်တစ်ချက်ပါ မချစ်ရေ။ ဖတ်ရတာ စိတ်တိုစရာ။
Crystal Thu Nov 24, 09:54:00 AM GMT+8
အားပေးတယ် အစ်မ၊ ချပစ်။
တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေ လက်ခံစရာအကြောင်းကို မရှိဘူး။
Thu Sat Nov 26, 09:56:00 PM GMT+8
New brand, Jetstar Chit Kyi Aye !